Semalt को पृष्ठ गति विश्लेषक तपाइँको वेबसाइट को लागी उपाय हो
१. Semalt को पृष्ठ गति विश्लेषक के हो?
२. किन लोड पृष्ठ गति मामला?
Live. Semalt को पृष्ठ गति विश्लेषक प्रत्यक्ष उदाहरणको साथ बुझ्दै
Inst. कसरी द्रुत रूपमा लोड गति बढाउन?
आज, एक वेबसाइट वा वेबपृष्ठको भाग्य मुख्य रूपमा यो कति द्रुत लोडमा निर्भर गर्दछ। वेबपृष्ठको लोड गतिको महत्त्व बुझ्नको लागि यी बुँदाहरूमा हेर्नुहोस्:
द्रुत लोड हुने पृष्ठहरूले न केवल अधिक आगन्तुकहरूलाई आकर्षित गर्दछन् तर उनीहरूलाई लामो समयसम्म व्यस्त राख्छन्। वेबपेज/वेबसाइटमा अधिक समय खर्च गर्दा प्राय: बढि व्यापार हुन्छ।
वेबपृष्ठ लोड मा असर यो समय बाउन्स दर। छिटो लोड हुने वेबपेजहरूको कम बाउन्स रेट छ, जबकि बाउन्स रेट पृष्ठहरू माथि छ र बिस्तारै लोड हुँदैछ। गुगलले बुझ्दछ कि उच्च बाउन्स रेट भएका वेबपृष्ठहरू बेकार हुन् (वा यति उपयोगी छैनन्)। त्यसकारण, उनीहरूले खोज परिणामहरूमा राम्रो प्रदर्शन गर्दैनन्।
अहिले, तपाईले एउटा संकेत पाउनुभएको हुनसक्छ पृष्ठ लोड गतिको किन महत्व छ। हो, लोड गति असर SEO को साथ साथै प्रयोगकर्ताको अनुभव।
त्यहाँ इन्टरनेटमा धेरै पृष्ठ गति विश्लेषकहरू छन्, तर ती मध्ये धेरैले कुनै सहयोग गर्दैन जब लक्ष्य वेबपृष्ठ/वेबसाइटको लोड गति वा प्रदर्शन बढाउनु हो।
तिमीलाई किन थाहा छ?
किनकि ती सबै आवश्यक प्यारामिटरहरूमा तपाईंको पृष्ठ अडिट गर्दैनन् र यसैले महत्त्वपूर्ण त्रुटिहरू औंल्याउन र समाधानहरू प्रदान गर्न असफल हुन्छन्। तर, यदि तपाइँ Semalt को पृष्ठ गति विश्लेषकको साथ एक पृष्ठ विश्लेषण गर्नुहुन्छ, त्यस्ता चीजहरूको चिन्ता बेमा राख्न सकिन्छ।
Semalt को पृष्ठ गति विश्लेषक के हो?
पृष्ठ गति विश्लेषक बाट Semalt वेबसाइटको लोड समयले गुगल खोजी ईन्जिन आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ कि भनेर निर्धारण गर्न एक विश्लेषण गर्ने उपकरण हो। यसले वेबपृष्ठको लोड समयलाई असर गर्ने त्रुटिहरूको पहिचान गर्न पनि मद्दत गर्दछ र यसलाई अनुकूलन गर्न फिक्सहरू सुझाव दिन्छ।
विज्ञहरू विश्वास गर्दछन् कि यो एक महत्त्वपूर्ण प्रदर्शन विश्लेषण उपकरण हो किनभने एक वेबसाइटको लोड समयले यसको सफलता वा असफलतामा निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छ। आउनुहोस् हामी कसरी यो नि: शुल्क पहुँच प्राप्त गर्न सक्दछौं पृष्ठ गति विश्लेषक केवल तीन चरणमा।
चरण 1: तपाईंको वेब ब्राउजर खोल्नुहोस् र टाइप गर्नुहोस् semalt.net ठेगाना बारमा। यसले तपाईंलाई Semalt को गृहपृष्ठमा लैजान्छ तपाईंको व्यवसायको लागि शक्तिशाली SEO उपकरणहरू।
चरण २: कर्सरलाई विन्डोको बाँया पट्टि लैजानुहोस् र क्लिक गर्नुहोस् पृष्ठ गति।
चरण:: को पृष्ठ विश्लेषक उपकरण केहि सेकेन्डमा खुल्नेछ। अब तपाईले आफ्नो साइटको यूआरएल इन्टर गर्नुपर्छ र मा क्लिक गर्नुहोस् जाँच गर्नुहोस् साइट विश्लेषण गर्न बटन।
पृष्ठ लोड गतीको मामिलाहरू किन?
पृष्ठ लोड गती प्रत्येक मोबाइलको लागि डेस्कटप उपकरणहरूमा वेबपृष्ठ खोल्ने प्रत्येक प्रयोगकर्ताको लागि महत्वपूर्ण छ। प्रयोगकर्ताहरूको सन्तुष्टि स्तर बढ्छ जब वेबपेज वा वेबसाइट तुरून्त लोड हुन्छ। केहि अन्य कारणहरू:
फ्रस्ट्रेट्स प्रयोगकर्ताहरू: ढिलो लोडिंग वेबपेजले प्रयोगकर्ताहरूलाई निराश पार्दछ र तिनीहरूलाई निराश गर्दछ। नतिजाको रूपमा, तिनीहरू मध्ये अधिकांश फिर्ता हुँदैन वा त्यस साइटको बारेमा नराम्रा कुरा गर्दछ।
रूपान्तरण दरहरु लाई असर गर्छ: जब एक वेबपृष्ठ बिस्तारै लोड हुन्छ, कम मानिसहरु यो मा रहन्छ र कम मानिस रूपान्तरण। एक ढिलो पृष्ठले प्राय: जसो प्रस्तावहरू, कल-टु-एक्शन, र तपाइँको साइटमा अन्य चीजहरूको देखा पर्नु भन्दा पहिले नै बाहिर जान्छ।
बाउन्स रेटलाई असर गर्दछ: बाउन्स रेट, प्रतिशतको रूपमा प्रतिनिधित्व गर्दछ, देखाउँदछ तपाईंको वेबसाइटको भ्रमण गर्ने मानिसहरूले केहि पनि नगरी छोड्ने छिटो। एक उच्च बाउन्स दर, प्राय: ढिलो वेबपृष्ठको कारणले गर्दा, पक्षमा काम गर्दैन।
मोबाइल प्रयोगकर्ताहरू टाढा ड्राइभहरू: एक ढिलो वेबपृष्ठ मोबाइल उपकरणमा लोड गर्न समय लिने अक्सर मोबाइल प्रयोगकर्ताहरूलाई टाढा ड्राइभ गर्दछ। यो अनलाईन व्यवसायको लागि राम्रो होईन। पछिल्ला केही बर्षहरूमा मोबाइल प्रयोगकर्ताहरूको संख्या लगातार बढिरहेको छ। त्यहाँ दावीहरू पनि छन् कि मोबाइल उपकरणहरूमा वेबपेजहरू खोल्ने प्रयोगकर्ताहरूले डेस्कटप मार्फत वेबपृष्ठहरू पहुँच गर्ने प्रयोगकर्ताहरूलाई पहिले नै पछाडि पारिसकेका छन। यस अवस्थामा, यो आवश्यक हुन्छ कि वेबपृष्ठ छिटो लोड हुन्छ।
त्यहाँ अन्य धेरै कारणहरू छन्, तर अब तिनीहरू छलफल नगरौं। एउटा कुरा तपाईंले याद राख्नुपर्दछ कि पृष्ठ लोड गतीले मात्र तपाईंको वेबसाइटमा सामग्री प्रासंगिक र उपयोगी छ। यदि होईन भने, वेबसाइटको गति बढाउँदा परिणामहरू नहुन सक्छ।
लाइभ उदाहरणको साथ Semalt को पृष्ठ गति विश्लेषक बुझ्दै
Semalt को पृष्ठ गति विश्लेषक प्रत्यक्ष उदाहरणका साथ बुझौं। हामी विश्लेषण गर्न गइरहेको वेबसाइट हो mywindows10.com।
यहाँ हामी कसरी यो वेबसाइटको विश्लेषण शुरू गर्‍यौं:
खोले पछि पृष्ठ गति विश्लेषक, हामी वेबसाइट को URL मा प्रवेश र चेक मा क्लिक गर्नुभयो। विश्लेषण रिपोर्ट हाम्रो स्क्रीनमा एक मिनेट भन्दा कममा देखा पर्‍यो।
रिपोर्टमा के छ?
mywindows10.com एउटा सानो वेबसाइट हो तर धेरै उच्च पृष्ठ लोड गति छ। तपाईंले यी चारवटा चीजहरू फेला पार्नुहुनेछ रिपोर्ट द्वारा Semalt को पृष्ठ गति विश्लेषक :
सारांश विन्डो (मोबाइल उपकरणहरूको साथ साथै डेस्कटपमा समग्र स्कोरको साथ)
वेबपृष्ठ लोड इमुलेशन
त्रुटिहरू ठीक गर्न
१ सारांश विन्डो
सारांश विन्डोले समग्र स्कोर प्रदर्शन गर्दछ (डेस्कटपमा साथ साथै मोबाइलमा) र स्कोर राम्रो, औसत, वा धेरै खराब लोड समय को प्रतीक हो कि प्रकट गर्दछ। यसले पृष्ठ लोड समय, सफल अडिटहरूको कुल संख्या, र कति त्रुटिहरू निश्चित गर्नुपर्नेछ देखाउँदछ।
यसले तपाइँको वेबसाइटको स्कोरको अर्थ के हो भनेर बुझ्न मद्दत गर्दछ। उदाहरणको लागि, -1 ०-१०० को स्कोरले राम्रो लोडिंग गतिलाई जनाउँछ र ०--4 of को अ extremely्कले अत्यन्त कम लोडिंग गतिलाई जनाउँछ।
को लागी mywindows10.comसारांश खण्डहरू यस्तो देखिन्छन्:
डेस्कटप को लागी
यस विश्लेषकको बारेमा सबै भन्दा राम्रो कुरा यो हो कि यो स्कोर उच्च छ भने पनि सटीक त्रुटिहरू औंल्याउँछ। जैसा कि तपाईं माथिको उदाहरणमा देख्न सक्नुहुन्छ, स्कोर 98 and र are are हो, तर यो अझै देखाउँदै छ कि त्यहाँ ११ डेस्कटप सम्बन्धित र १ mobile मोबाइल सम्बन्धित त्रुटिहरू समाधान गर्नका लागि छन्।
यो खण्डले तपाईंलाई तत्काल नि: शुल्क परामर्श अनुरोध गर्न र विस्तृत रिपोर्ट डाउनलोड गर्नका लागि PDF प्रारूपमा निःशुल्कका लागि पनि अनुमति दिन्छ।
२. वेबपृष्ठ लोड इमुलेसन
यस सेक्सनमा डेस्कटप/मोबाइल ब्राउजरमा वेबपेज लोड गर्ने प्रक्रिया अनुकरण गरेर प्राप्त छ ()) म्याट्रिकहरू छन्। उद्देश्य भनेको कसरी उपयोगकर्ता मैत्री वेबपृष्ठ छ र ​​यो राम्रोसँग Google SERP प्रमोशनको लागि अनुकूलित छ भनेर देखाउन हो।
इमुलेसनका लागि प्रयोग गरिएको मेट्रिकहरू हुन्:
पहिलो सामग्री सामग्री रंग
पहिलो अर्थपूर्ण पेन्ट समय
पहिलो CPU निष्क्रिय समय
अन्तर्क्रियात्मक बन्ने समय
अधिकतम सम्भाव्य पहिलो इनपुट ढिलाइ समय
को लागी mywindows10.com, यो खण्ड यस्तो देखिन्छ:
यदि तपाईंले याद गर्नुभयो भने, प्रत्येक मेट्रिकमा लिंक हुन्छ (थप जान्नुहोस्)। जब तपाईं यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ, नयाँ पृष्ठ खुल्छ जुन त्यो मेट्रिकको बारेमा उपयोगी जानकारी समावेश गर्दछ।
Fix. त्रुटिहरू ठीक गर्न
यो सेक्सनले वेबपेजको लोड गतिलाई असर गर्ने त्रुटिहरू समावेश गर्दछ। यो पनि यसलाई ठीक गर्न सुझाव छ। यदि तपाईं तिनीहरूमा काम गर्नुहुन्छ भने, तपाईंको पृष्ठ छिटो लोड हुन्छ र अधिक आगन्तुकहरूलाई आकर्षित गर्दछ।
तपाईं छविहरूको लोड समय, उनीहरूको ढाँचा, आकार, तपाईंको साइटमा बिभिन्न तत्वहरू, र अन्य धेरै चीजहरूको बारेमा सुझावहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ। को लागी mywindows10.com, यो खण्ड यस्तो देखिन्छ:
यदि तपाईंले याद गर्नुभयो भने, त्यहाँ प्रत्येक सुझावको दाहिनेपट्टि ड्रपडाउन एर्रो छ। जब तपाई यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ, यसको बारेमा अधिक जानकारी देखा पर्ने छ। प्रत्येक सुझावको पनि लिंक छ (अधिक जान्नुहोस्) अन्तमा तपाईंलाई बढि प्रासंगिक जानकारी प्राप्त गर्न मद्दत गर्न।
Success. सफल अडिट
यो सेक्सन ले तपाईको वेबपेजको अधिकतम प्रदर्शनको लागि उपयुक्त अडिट परिणाम देखाउँदछ। तपाइँलाई अधिक मद्दत गर्न, ड्रपडाउन मेनू र "थप जान्नुहोस्" लिंकहरू अघिल्लो सेक्सनहरूमा जस्तै छन्।
कसरी द्रुत रूपमा लोड गति बढाउन?
यदि तपाईं निम्न केहि चीजहरू आफ्नै लागि गर्न सक्नुहुनेछ भने, तपाईं आफ्नो वेबसाइट/वेबपृष्ठको लोड गतिमा उल्लेखनीय वृद्धि देख्नुहुनेछ:
छविहरू अनुकूलन गर्नुहोस्: छविहरूका साथ मुद्दाहरूले अधिकांश साइटहरूको प्रदर्शन खराब गर्दछ। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको साइटमा छविहरू अनुकूलित छन् र सानो आकारका छन्। आजकल सब भन्दा राम्रो ढाँचा WEBP हो। छविहरू अनुकूलन गर्ने प्रक्रियामा, गुणस्तर पनि दिमागमा राख्नुहोस्।
पृष्ठ आकार घटाउनुहोस्: ठुलो साइजको वेबपेजको अर्थ यो लोड हुनको लागि लामो समय लिने छ। तपाईं कम्प्रेसन, मिनिफिकेशन, र प्रयोग नगरिएका स्क्रिप्टहरू हटाउन सक्नुहुन्छ।
क्याचिंग प्रयोग गर्नुहोस्: क्याचहरूले फाईलहरू पुन: प्रयोग गर्न पुन: डाउनलोड गर्न मद्दत गर्दछ। त्यसो भए, जब सम्भव भएमा क्यासि। प्रयोग गर्नुहोस्।
CDN प्रयोग गर्नुहोस् (सामग्री वितरण नेटवर्क): CDN बहु साइटहरूमा साइटको सामग्री क्यास गर्दछ। यसले पृष्ठ गति बढाउन मद्दत गर्दछ किनभने CDN को क्यासिंग सर्भरहरू प्राय: लक्षित दर्शकहरूको नजिकै अवस्थित हुन्छन्। के तपाईं सीडीएन (सामग्री डेलिभरी नेटवर्क) प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ?
चाहे यो केहि खरीदको बारेमा हो, केहि सेवाको सदस्यता लिईरहेको छ, वा केहि बारे मा जानकारी प्राप्त गर्न को लागी, संसार को सबै भन्दा धेरै अनलाइन अन्तरक्रिया गर्दछ। यस परिदृश्यले द्रुत-लोडिंग वेबपेजहरूलाई एक आवश्यकता बनायो।
त्यस्ता पृष्ठहरूले सुनिश्चित गर्दछ कि तपाईंको लक्षित दर्शकहरूले तपाईंको सामग्री छिटो हेर्छ र तपाईंको राजस्व र नाफा बढाउन मद्दत गर्दछ। यसबाहेक, छिटो लोड हुने पृष्ठहरूले बाउन्स रेट घटाउँछ र तपाईंलाई आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरूमाथि किनार दिन्छ।
तपाईंले नियमित रूपमा तपाईंको वेबपृष्ठहरू/वेबसाइटको गति विश्लेषण गर्नुपर्दैन तर यसले यो सुनिश्चित गर्नु पर्छ कि यसले समावेशी सामग्री समावेश गर्दछ जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई सन्तुष्ट पार्दछ। यदि तपाईं कसरी आफ्नो वेबपेजहरू गति बढाउने वा तिनीहरूको गति बढाउन चाहानुहुन्न भन्ने कुरा बुझ्नुहुन्न भने, विज्ञहरूको साथ सम्पर्कमा रहनुहोस् Semalt।